PEAR "SHIRKA": BEERASHADA IYO DARYEELKA, SHARAXAADA KALA DUWAN, SAWIR - KU'SAABSAN
Kala duwanaansho isbarbar socda "Shirka": sifooyinka, beerashada agrotechnology
Pear waa mid ka mid ah geedaha midhaha ugu caansan, iyo miraha khudradda ayaa loo isticmaalaa labadaba isticmaalka cusub iyo samaynta macaanka, waxsoosaarka, khudradda la qalajiyey iyo macmacaanka kale ee macaan.
Intaa waxaa dheer in dhadhanka u wanaagsan, pear sidoo kale wuxuu leeyahay content sare ee nafaqooyinka, sidaas beerta kasta waa in ay koraan ugu yaraan hal pear geed.
In this article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan pear "Shirka", tixgeliyaan sharaxaadda kala duwan, faa'iidooyinka iyo waxyeelada midhaha, iyo sidoo kale sifooyinka beeritaanka iyo daryeelidda warshadda.
"Pear" "Conference" waxaa loola jeedaa kala duwanaanshaha taranta Ingiriiska. Waxaa la rumeysan yahay in kala duwanaanshahan uu ahaa natiijada pollination free "Deon Leclerc de Laval" qeybtii 2aad ee qarnigii XIX.
Sannadkii 1895 ayaa la dabaaldegaa markii Shirwaynaha Qaranka Ingiriiska ee ku saabsan beerashada isteroberka la qabtay. Waxay ahayd in kala duwanaanshahan la calaamadeeyay, oo ay uga mahadcelinayaan dhacdadan pear magaceeda.
"Shirka" waa noocyo badan oo dayrta oo caan ah waxayna leedahay waxyaabo kala duwan oo ka soocaya noocyo kale oo isteroberi ah, sidaa darteed, waxaan ka fiirsan doonaa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan geedaha iyo miraha.
Dhirta dhirta ayaa leh awood korodh ah koritaanka ama waxay ku kala duwan yihiin xoog. Geedka wuxuu leeyahay dhumuc ballaaran oo ballaaran leh, tufaaxa caleenta, kaas oo si wanaagsan u caleen.
Geedka weyni wuxuu gaaraa dherer ugu yaraan 5 mitir. Qaybta caleen ee geedka waxaa lagu gartaa taarikada caleenta cagaaran.
Guga, caleemaha waxaa lagu kala soocay jeexan-cagaaran, oo u dhow dayrta - waxay helayaan moodooyinka cagaaran ee madow. Geedka ubaxyada xilliga gu'ga, ubaxyada waxaa lagu ururiyaa kooxo yaryar. Blossom waxay leedahay midab cad iyo casaan ah oo ur weyn.
Miraha of pear ku kala duwan yihiin size weyn, juiciness iyo dhadhan macaan. Mid ka mid ah pear waxay miisaankeedu dhan yahay 150 g, miraha waxay leeyihiin qaab dhalaalaya oo u eg.
Isterobar waxaa calaamad u ah maqaarka, cufan, maqaarka cagaaran-jaalaha ah. Inta badan, on miraha in qorraxdu toos u muddo dheer, dhibco guduud ah foomka hal dhinac ah.
Fiiri noocyada kala duwan ee isteroberi sida "Century", "Bryansk Beauty", "Honey", "Rossoshanskaya macmacaanka", "Hera", "Krasulya", "Otradnenskaya", "Rogneda", "Fairytale", "Duchess", " Lada. "
Jidhku wuxuu leeyahay jaale, midab leh ama midab casaan ah, qaab dhismeed leh, caraf udgoon iyo midho wanaagsan.
Pear "Shirka" ma aha oo kaliya midho dhadhan leh, laakiin sidoo kale aad u faa'iido badan. Waa mid hodan ku ah citric, malic, oxalic acid, taas oo caadi ah hababka dheefshiidka. Waxa ku jira fiitamiin A, B, C. Midhaha miraha waxay kaloo ku badan tahay iodine, potassium, calcium, magnesium, copper, fosfooraska, birta iyo birta. Miro ayaa ku jira qadar badan oo fructose ah oo uu ku yar yahay glucose-yada iyo kalooriyeyaasha, sidaas darteed Shirkadda waxaa lagu talinayaa in ay isticmaasho pear inta lagu guda jiro mudada kuurada ee beeryarada, iyadoo cayil iyo sonkorow.
Miraha waxay leeyihiin saameyn wax ku ool ah oo ku shaqeynaya wadnaha oo ay sabab u tahay kordhinta maaddada potassium.
Ma taqaanaa? Maraakiibta ka soo jeeda Giriikada hore waxay isticmaaleen pear ah inta lagu jiro safar dheer, iyada oo tixgelinaysa daaweyn loogu talagalay seasickness.
Iyada oo ay sabab u tahay kordhinta maaddooyinka sunta dabiiciga ah, hababka dheefshiidka, dheef-shiid kiimikaadka, kicinta hawsha beerka iyo kelyaha ayaa kobcaya.
Marka la eego dhibaatada isticmaalka, waa mid aan ku dhawneyn, waxa ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo isbeddellada jirkaaga iyo in aadan cunin wax ka badan 2 pears maalintii.
Waa mid aan lagugula talin in lagu isticmaalo miraha cayriin haddii ay dhacdo cudur ka mid ah mareenka caloosha iyo mindhicirka, gaar ahaan boogaha caloosha. Cuncunka xabka mindhicirka ayaa laga yaabaa inuu dhaco haddii midhaha soonka la cuno. Waxaa sidoo kale laga mamnuucay in uu cabo dareere ka dib markii uu isbiiriyo, sababtoo ah taasi waxay keeni kartaa shuban iyo xanuunka caloosha.
"Shirka", shaki la'aan, waxay ku jirtaa booska hogaanka ah ee liiska noocyada la isticmaalo, laakiin tixgelin si faahfaahin dheeri ah oo dhan.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwanaanta waa:
Pear wuxuu bilaabmaa goor hore, si fara badan oo si joogto ah u dhali karaa miraha ka dib markii laga beerto geedo, dabcan, haddii aad raacdo dhammaan xeerarka daryeelka ee warshadda.
Awood u leh is-iskutallaabin. Uma baahna noocyo u nugul xaafadda. Faa'iidada ugu weyn ee is-isu-dhirin waa xaqiiqda ah in manka si caadi ah loo hirgeliyo 80% kiisaska. Thanks to feature this, bannaanka u kuwaas oo aan lahayn meel ballaaran si ay u abuuraan beerta oo kaliya abuuri hal pear ah. Haddii dhulkiinnu yahay mid ballaadhan, "Shirka" wuxuu noqon doonaa rinjiriir heer sare ah oo noocyo kale ah. Ku dhowaad kugula talin beerashada "Hoverla", "Striyskaya", "Kucheryanka".
Thanks to dhadhanka ugu wanaagsan ee miro, isteroberi waxaa lagu beeray ma aha oo kaliya isticmaalka guriga, laakiin sidoo kale on beeraha, oo ah qiyaasta warshadaha.
Laakiin, inkastoo dhammaan faa'iidooyinka kala duwan ee la tixgeliyey, waxaa jira weli cillado qaar, oo ka mid ah:
Dhibaatada jiilaalka oo liita. Haddii heerkulka hawadu hoos u dhaco ilaa 22 digrii - geedka ma noolaan doono.
Saameynta cimilada ee fruiting. Haddii cimiladu tahay daruur, qabow, roobab iyo dabaylo xagaaga ah, miraha laga yaabo in aysan bislaynin ama dhadhanku aad u xanuunsanayaan.
Waa muhiim! Xaaladda ugu wanaagsan waxaa loo tixgeliyaa inay ahaato cimilada qorraxda, kaliya kiiskan si habboon u bislaanshaha miraha.
Nasiib darro ayaa saameyn ku yeelata saameynta fangaska, oo ay soo gaadhay horumarinta cuduro kala duwan.
Si aad u doorato seedling tayo leh, waa inaad raacdaa xeerarka:
Fadlan fiiri seedling. Waa in ay ahaato mid caafimaad qabta, oo joogto ah, oo cusub. Waa inay ku jirtaa nambar leh dhirta kala duwan iyo meelaha koraya ee lagu taliyey.
Xaaladdan oo ah in xididdada seedling ay furan yihiin oo aysan haysan miyir beedeed, kuwaas oo mararka qaarkood maskax ahaan u jajabin kara nidaamka xididka ama la qalajiyey, waa inaad si taxadar leh u eegtaa waxyaabaha wax beerto oo ku salaysan sharafnimada. Nidaamka asaasiga ah ee pear caafimaad leh waa iftiin, labadaba dibadda iyo gooyaa, ma laha wax dhibco ama koritaan.
Dhirta da'yarta, aan ka badnayn 2 sano, ayaa lagula talinayaa iibsashada.
Dhirta sanadlaha ah ma laha taajo, haddii aad ka iibsato geedo waaweyn, waxaa lagu talinayaa in la doorto tijaabooyinka si siman loo qaybiyo caleemaha.
Fure u ah horumarka seedling wanaagsan waa meesha saxda ah ee beerto. Ciidda ku on pears waxaa la beeray waa in ay noqdaan dabacsan iyo iftiin, laakiin leh awood u leh in ay hayn qoyaan. Miisaanka acid-saldhig ee ciidda waa in ay noqdaan dhexdhexaad ah ama yar yar alkaliin. Xulashada ugu wanaagsan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay digaam, xaydh ama kariimka madow, oo aan ku habooneyn beerashada: carrada cagaarka leh ama ciidda ciidda leh, dhoobo culus, peat, carruntii aamusnayd.
Horumarka caadiga ah ee carrada wuxuu ku xiran yahay qadarka iftiinka qorraxda, kulaylka iyo hawada cusub, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la xushmeeyo meelaha loogu talagalay beeritaanka pear kaas oo buuxiya shuruudahan.
Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in geedka uusan u dulqaadan karin gustsada xooggan ee dabaysha, sida xilliga qaboobaha dhirta ayaa jabin kara, iyo guga iyo xagaaga - luminta ubaxa, ugxan iyo miraha.
Laguma talinayo in la beero pear ee dooxooyinka, maxaa yeelay qiyaasta xad-dhaafka ah ee biyaha dhulka hoostiisa ayaa saameyn xun ku yeelan kara geedka iyo muujinaysa qaabka uu ujeeda xididada.
Iyadoo la tixgelinayo in geedka dhererkiisu dheeraan doono taajka ballaaran, waxaa lagama maarmaan ah in laga beero dalagyada kale ee dilka ah. Haddii laba pears loo qorsheeyay in lagu beero agagaarka, ka dibna masaafada udhigaan ugu yaraan 5 m inta u dhaxeysa.
Haddii ay jirto derbi u dhow pear, taajku wuxuu abuuri karaa khaldan, taas oo ka sii dari doonta fruiting ama xanuujiso maqnaanshihiisa.
Waa muhiim! Marka xigta geed khafiif ah, pear wuxuu noqon karaa mid marar badan soo gaadhsiiyo cudurrada iyo cayayaanka, maadaama ay ku dhacaan cuduradan, sidaas darteed si joogto ah ayuu u qaadi karaa midba midka kale.
Haddii aad ku nooshahay aag yar, ka hor inta aadan beerin pear waa in ay daryeeshaa beerista beerta.
Marka hore, mid ka mid ah waa inuu soo qaadaa meesha ugu sarraysa oo uu qodo meeraha yar yar ee wareegga dhulka, u qaado dhulka aad u hooseeya, kaas oo ku yaal gadaasha beerta si ay biyaha u dheereeyaan halkaa.
Ka dibna ka taxadar shubka miiraha oo ay ku jeexi doonaan isteroberi. Baxsan, waxaad ku dili kartaa isticmaalka jirridda, iskutallaabta, laamoodka, cawska, caleemaha dhacay ama qashinka guriga.
Ugu horreyntii, dhulku waxa uu ka buuxsamey dheecaan, qaybaha ugu weyn oo tartiib tartiib ah ayaa si tartiib tartiib ah loo dhigayaa, qaybo yaryar iyo qaybo dabiici ah ayaa la dhigaa kor.
Dheecaanku waxay ka buuxsameen ciidda horay looga soo qoday godadka. Waxay ku talineysaa in ay fuliso nidaamka xilliga dayrta, si markaa xilliga jiilaalka ay u socdaan meelo ay degaan oo ay ku degan yihiin. Qodobbada beeritaanka geedo u baahan yahay in la diyaariyo horay, haddii beeritaanka la samayn doonaa guga, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad qodo godka dayrta, iyo haddii dayrta, ka dibna bil ka hor laga beerto.
Geedka dhirta xoog leh ee sii kordhaya waa in lagu beeray godadka leh dhererka hal mitir iyo mitir iyo qoto dheer oo ah 1 mitir oo ah cufnaanta cirifka ee quince waxay u baahan tahay god oo ah 90 cm ballaaran iyo 80 cm qoto dheer.
Baro sida loo abuuro pear.
Ka fikir talaabo faahfaahsan talooyinka talaabada ah ee ku saabsan sida loo abuuro seedling ee godadka diyaarsan:
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay si aad u diyaariso taageero adag, kaas oo lagu hagaajin doono godka si markaa loo xiro sapling.
Qeybta hoose ee godka, isku dar ah pre-diyaarinta ee ciidda waxaa lagu shubay, taas oo kaas oo wax ku ool ah ee beeraha lagu daray, qaabka compost ama humus, ka hor inta dhismaha buuraha.
Derbiyada waxaa lagu dhajiyaa buurta, halka qoorta xididka aan la beddelin.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah u toosiso xididada oo buuxiso ceelka carrada kaas oo lagu qaso arimaha bakeeriga.
Carrada ku wareegsan jirridda waxaa lagu farsameeyaa si looga hortago joogitaanka voids ee xididada.
Ka dib markii la beero, waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo saf sapo ah, oo ah qiyaasta saddex baaldiyo oo biyo ah.
Dheeraad ah ayaa lagu taliyey in la gooyo ciidda leh balka ama caws.
Nidaamka ugu dambeeya waa qalab jilicsan si loo taageero.
Si pear ah si fiican u dhali karaa oo si caadi ah u koraan, waxay u baahan tahay inay bixiso daryeel habboon.
Si loo helo pear si ay u dareemaan meel wanaagsan oo cusub, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo waraabinta waqtiga warshadda - tayada iyo tirada miraha, iyo sidoo kale koritaanka geedkii, si toos ah ugu tiirsan iyaga.
Waraabinta waa lagama maarmaan iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada, noocyada ciidda iyo da'da pear. Haddii xagaaga uu qalalan yahay - waraabinta waa inay si gaar ah u taxadaraan, ugu yaraan toddobaadkii hal mar laba ama saddex baaldiyood oo ka hooseysa geed kasta.
Guga, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato daryeel gaar ah oo loo dabciyo dhulka iyo jaridda dhirta, si aanay u waxyeeleyn nidaamka xididka, gaar ahaan geedo yar yar.
Si aad u daboosho dhulka, waxaa lagula talinayaa in la qodo wareegga garabka iyo naaska oo la nasiyo. Xilliga dayrta, si loo ilaaliyo xididdada laga bilaabo khalkhalka, waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro mulching of goobada jirridda ee lakabka ku filan qaro weyn. Sida mulch waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo balka, caleenta geedo ama caws. Shub mulch waa in ay ahaato ka dib marka ciidda la qodo iyo dhar la sameeyo.
Pear waa warshad u baahan baahida sare ee humus ee ciidda. Inta lagu jiro xilliga gu'ga guga, waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo ku dhawaad ​​4 baaldiyo oo khudradda ka hooseysa hal geed, iyada oo la tixgelinayo da'diisa iyo cabbirka.
Haddii ay jirto yaraanta walxaha dabiiciga ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro 30 g oo amooniyam ah, iyo inta lagu jiro xilliga dayrta xilliga dayrta, potassium sulphate ee qaddarka 30 g iyo superphosphate ee qaddarka 50 g lagu darey.
Waa muhiim! Laguma talin in lagu daro nitrogen xilliga dayrta, maadaama ay suurtagal tahay in lagu kiciyo xaalada jiilaalka iyo abuuritaanka caqabadaha koritaanka caadiga ah ee caleemaha.
Waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in haddii aad dalbanayso Bacriminta macdanta tiro badan, miraha waxay noqon doonaan kuwo liitaa oo liita oo waxyeello u leh caafimaadka.
Ku buufinta ka hortagga
Si looga hortago musuqmaasuq ama baro cawlan, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro hadhaaga dhirta ee wareegga agagaarka warshadana gubi.
Ujeedadaas oo kale waa lagama maarmaan in la soo saaro dabacsanaan qoto dheer iyo qodaya ciidda xilliga dayrta iyo guga. "Shirka" waxay u badan tahay inuu u adkaysto dhibcaha brown haddii bacriminta macdanta ah ee fosfatiga laga isticmaalo sannad kasta.
Xilliga dayrta, Nitrophoska ayaa lagula talin karaa tan. Haddii calaamadaha ugu horreeya ee soo galo, waxay u muuqanayaan dhibco yaryar caleemo madow oo leh dhibco madow, oo la buufiyo dareeraha Bordeaux isla markiiba waa in la sameeyaa.
Daaweynta ugu horeysa waxaa la sameeyaa bisha Abriil, waayo dareertan Bordeaux ee qadar 30 ml ah ayaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah.
Qalabaynta labaad ayaa la sameeyaa kaddib marka dhirta ay soo baxdo, xaddiga dareenka daroogada ayaa hoos loo dhigaa 3 jeer. Daaweynta saddexaad waxaa la sameeyaa dhamaadka bisha ka dib markii hore. Si looga hortago dhibic cad ama septa, waa lagama maarmaan in la soo saaro daaweynta Nitrafen xilliga gu'ga iyo xilliga dayrta, iyadoo la isticmaalayo 100 g oo badeeco ah 10 litir oo biyo ah.
Si looga hortago horumarinta kansarka madow, taas oo muujinaysa qaabka dhibco madow iyo caleemaha, miraha iyo asliga, waxay lagama maarmaan tahay in la soo saaro dayrta dayuurada iyo laamaha waaweyn ee caanaha lime, taas oo lagu daro sulphate copper at heerka of 100 g ee wax soo saarka ah 10 l oo isku dar ah lime.
Sidaas darteed pear ma ku dhuftey pearpod, waxaa lagama maarmaan ah dhowr maalmood ka hor blooms geedka iyo isla markiiba ka dib markii ubax si ay buufin leh Agravertin.
Bil kasta ka dib, buufinta waa in lagu celiyaa, laakiin la isticmaalayo Kinmiks. 30 maalmood kadib, buufinta ayaa lagu celiyaa, Spark-Bio ayaa loo isticmaalaa.
Ka hortaga patch pear waxaa suurtogal ah in la soo saaro pear ka hor inta ubax la leh 3% xal Karbofos, ka dib markii ubax geed waxaa lagu baari karaa Iskra-Bio ama Agravertin. Laga soo bilaabo leafworm, pear waa la shaqeynayaa guga, marka heerkulka habeenku ka badnaan doonaa eber. Waqtigaan, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo geedka "Tsimbush".
Qayb kale oo muhiim ah oo ku saabsan daryeelka cayayaanka waa midabaynta joogtada ah iyo taajajinta. Nidaamka waxaa la sameeyaa xilliga guga, mar marka heerkulbeeggu muujiyo heerkul fiican habeenkii.
Waa muhiim inaad haysatid wakhti aad ku fujiso ka hor inta aan la bilaabin xilliga firaaqada firfircoon..
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad barato sida loo saxo pear guga.
Qaabka taajka, oo aad ku dhejin doonto geedka, waxaad dooran kartaa naftaada, waxay noqon kartaa:
Palmette - nooca taajka, taas oo ah wax yar oo ka soo horjeeda koritaanka geed. Sannad kasta waa lagama maarmaan in la yareeyo laanta ugu weyn - kormeeraha ilaa 30 cm, sidoo kale dhuuban taajkii dhagaxyada ka baxa iyo ka saar laamaha la saameeyey oo la qalajiyey.
Foomka aan kala-sooc lahayn kaas oo kareemaha la jarayo waxoogaa ka sarreeya caleemaha dhinaca koraya, iyo tier cusub oo 4 laamood ah ayaa la sameeyay. Laamihii soo koraya, iyo sidoo kale caleemaha, ayaa gebi ahaanba la gooyaa. Caleemaha koraya, gaaban ee xaashida 1aad ama 2aad.
Labada koowaad iyo kiis labaad waa lagama maarmaan in la yareeyo caleemaha vertical sii kordhaya - dushooda, taas oo dhumucda taajka, laakiin ma midho u dhali.
Ma taqaanaa? Wadamada yurub, pear ayaa ka yimid Koonfurta Aasiya, waqtiga qiyaastii - 1 kun sano oo BC. er Later, dhammaan isteroberi ayaa laga yaabaa inay ku raaxeystaan ​​Waqooyiga Ameerika, halkaas oo pear la keenay kaliya 1620.
Xilliga dayrta, waxaad u baahan tahay inaad dhisato hoy ku yaal jiilaalka caadiga ah. Gaar ahaan waa adag tahay in laga badbadiyo qaboobaha qaboobaha saplings yar yar.
Si loo ilaaliyo dhirta yaryar ee dhaxanta iyo jiirka, waxaa lagu talinayaa in lagu xiro laamood cufan iyo alaabo daboolan oo si fiican u neefsanaya.
Guga hore, hoyga waa in laga saaraa si looga hortago kuleylka kuleylaha xilliga qaboobaha, taasoo sababi karta dhimashada geedka.
Sidaa darteed, shirarka pear waa noocyo kulul oo jecel oo waxaa lagu talinayaa in laga beerto gobollada leh qaboobaha koonfureed ee koonfurta. Waa sahlan tahay in lagu xanaaneeyo warshad, waxa ugu muhiimsan waa in la fuliyo manjooyin geedka waqtigooda, si dharka loogu sameeyo, waraabiyo iyo lagu buufiyo si aad u hesho dalag weyn oo tayo sare leh.